प्राविधिक समस्याबाहेक अरु अवस्थामा विद्युत कटौती हुँदैन : प्राधिकरण
नो लोडसेडिङ !
विद्युत चोरीलाई निरुत्साहित गर्दै साँझ र बिहान हिटर, वासिङ मेसिन, आइरन, पानी तान्ने पम्प नचलाउन कार्यकारी निर्देशक घिसिङको आग्रह
बिहीवार, ६ पौष २०७४, रासस/ (आहा खबर).
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राविधिक समस्याबाहेक कुनै पनि अवस्थामा विद्युत्भार कटौती नहुने स्पष्ट पारेको छ । विगत केही दिनदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा विद्युत्भार कटौती हुने आशयका समाचार सार्वजनिक भएपछि प्राधिकरणले बत्ती ननिभ्ने प्रष्ट पारेको हो ।
हाल औद्योगिक ग्राहकलाई दैनिक तीन घण्टाबाहेक अन्य ग्राहकलाई घोषित-अघोषितरुपमा कुनै प्रकारको विद्युत्भार कटौती नभएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । प्राविधिक समस्याका कारण कहीँ कतै केही समयसम्म विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध आएको भए पनि विद्यत्भार कटौती नहुने उनले बताए ।
“समस्या देखिएका स्थानमा प्राविधिक टोली खटाएर समाधान गर्दैआएका छौँ,” उनले भने । विद्युत् आपूर्तिमा गुणात्मक सुधार ल्याउन ग्राहकको मागलाई ध्यान दिई फिडर तथा ट्रान्सफर्मरको क्षमता बढाइएको र वितरण प्रणालीलाई सदृढ गरिएको उनले बताए । हिउँद लागेसँगै खोला तथा नदीमा पानीको वहाब घट्दा विद्युत् उत्पादनमा कमी आउने गरेको छ । यही समयमा विद्युत् माग बढ्ने हुँदा उपलब्ध सीमित उत्पादनले विद्युत् माग र आपूर्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।